Ndimu Yechando mbeu | MyWeedSeeds.com
Lemon Ice isativa-hukuru hwakasiyana siyana hunokura hwakareba uye hwakasimba. Iye zviri nyore zvine musoro kukura, izvo zvinomuita iye sarudzo yakanaka kune varimi vechidiki. Lemon Ice anodisa zuva, asi anochinjika kuti aite zvakanaka mumba kana iwe ukamupa mwenje yakakwana uye nzvimbo yekukura. Iye anogadzira yakawanda yemakomputa, ane simba maputi. Iye isarudzo yakanaka kune varwere vekurapa avo vanoda rubatsiro nekuzvidya mwoyo kana kunetseka. Lemon Ice ine inofadza, kunhuhwira kwemarimu uye kuravira kuenderana. Her nyowani ndimu-senge tara inouya kunyangwe yakanakisa mune yakachena fomu yekubatana. Iye anogadzira yakakwira iyo inosanganisira kubata kwake kwake indica genetics, kunyange iri yakanyanya sativa. Iwe unozowana yakatsetseka indica muviri kurohwa kwemaminetsi mashoma pasati sativa yatanga kupinda. Ipapo iwe unozonakidzwa neyake yakasarudzika sativa yakakwira, yakasimudzirwa kwazvo uye inozorodza. Ndiye sarudzo huru yehusiku hwehusiku hunosimbisa - anokuchengeta uchienda uye uchinzwa zvakanaka.